Mabhangi ndiwo akanyanya kurova chikamu mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Mabhangi ndiwo akanyanya kurohwa chikamu mumusika wemasheya
Iko kusagadzikana uko misika iri kusangana nemazuva ano mu Italy neSpain iri kuranga zvakaomarara tsika dze banking sector. Chaizvoizvo pasina kusarudzika uye nenhamba yekutengesa iyo inokwezva kutariswa kwevanoongorora zvemari. Kusvika padanho rekuti kumwe kuderedzwa kwemitengo hakubvisirwe kunze kwemazuva anotevera. Chero zvazvingaitika, kune mamirioni mazhinji ayo varimi vane nzvimbo dzakashama mune izvi zvirevo zvakarasika. Iko kutengesa kuri kuisa pachena pakutenga. Iine yakakwira kwazvo yekutengesa vhoriyamu iyo inoratidza iko kwechokwadi kwekufamba uku.
Ndichiri mumazuva mashoma, indekisi yekusarudza yeSpanish stock stock, iyo Ibex 35, inenge 4% yasaraMaitiro anomiririrwa nemabhangi ndiwo akanyanya kukanganiswa. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti maitiro ayo ari kuve asi iwo akasara zvikamu zvemusika wemasheya. Nekuderera mune zvimwe zviitiko pamusoro pe5%. Izvi zvinoratidza kuti haisi nguva yakanaka yekusarudza mabhangi panguva yakadai panguva yemisika yemari. Iko kune tsinga dziri pamusoro uye chero nguva chero kutya kwekuenderera kwezvino maitiro emisika inogona kusvika.
Haasi mabhanga eSpain chete ari kudonha zvakaoma mumazuva ano ekusava nechokwadi kwakawanda. Asi zvinopesana, maitiro ekutengesa aya ari kukanganisa aya ekare kondinendi, kunyangwe zvisiri zvakanyanya senge zvemunyika. Icho chikamu chiri kurasikirwa nerutsigiro rwekukosha kwakakosha uye icho chinozivisa kuwedzera kuwira mumazuva anotevera kana mavhiki. Iko chinhu chinonyanya kukosha ndechekuve padivi pezvinzvimbo zvavo. Izvo zvidiki kwenguva yakati rebei kana zvishoma.
1 Mabhangi: kushaya simba munzira yavo
2 Bankinter inovavarira kusiyanisa kukuru
3 Bankia: kushomeka kudhonzwa nezvidhina
4 Santander yakadzikira hunyanzvi hwayo
5 BBVA ine yakakwira nhanho kusava nechokwadi
6 Chii chingaitwe nevarimi?
Mabhangi: kushaya simba munzira yavo
Kana shanduko yemabhangi eSpain panguva ino inoratidzirwa nechimwe chinhu, zviri pachena nekusimba kwavo kwehunyanzvi uye kunyangwe hazvo vamwe vacho vaine kukura kwakanyanya kugona mune yepakati uye kunyanya kwenguva refu. Asi mukumhanyisa mashandiro, kuburitswa kuri pachena zvisina basa panguva ino kunofanirwa kudzivirirwa. Kune dzimwe njodzi kupfuura mabhenefiti izvo zvinogona kuburitsa nzvimbo dzako dzakavhurika. Nenjodzi yekurasikirwa nechikamu chakanaka chemari yakachengetwa. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Kurudziro yevaongorori vezvemari yakajeka kwazvo mune dzino chaidzo nguva: tengesa, tengesa uye tengesa. Uye kana iwe usinga zarurwe kune urwu rudzi rwechengetedzo, yakanakisa nzira yekudyara ndeye kumirira. Nekuti pasina kupokana pachave nemukana wekutenga zvikamu zvavo pa yakanyanya kukwikwidza mitengo kupfuura avo vanoratidza izvozvi. Semhedzisiro yechiitiko ichi, chinhu chekutanga chichawanikwa nevashambadzi vadiki nepakati mukana wakakura wekuwedzera purofiti yavo. Ehezve, kana misika yequity yadzikama. Chinhu icho chazvino chakaomesesa kunyangwe isu tichafanirwa kunyatsoteerera kutarisa shanduko yayo.
Bankinter inovavarira kusiyanisa kukuru
Nekuda kwehunyanzvi hunyanzvi, iyo inoratidza chimiro chiri nani ndivo vamiririri vebhanga riri pakati nepakati senge Bankinter. Hazvishamise kuti yakavhara mwedzi mitatu yekutanga ye2018 nemubhadharo wemambure e143 mamirioni euros, uye nemari pamberi pemutero we195,9 mamirioni. Iyi data inomiririra a kukura kwe15%, uye 14,2%, zvichiteerana. Nezve huwandu hwehunhu hwakapihwa nebhangi iri, iri 3,40% kubva pa3,90% gore rapfuura. Chero zvazvingaitika, yakave nekuvandudzwa kwehunyanzvi mumwedzi ichangopfuura iyo yakurudzira vazhinji vatyairi kuti vavhure zvinzvimbo muboka iri rezvemari, kunyangwe nenjodzi dzakabatana nerudzi urwu rwekushanda.
Iko kukosha kwekudzivirira mukati mebhengi uye hauna kurangwa zvakanyanya mumazuva ano ekusagadzikana kwezvematongerwo enyika nehupfumi munguva yakapfuura. nyika dzekunze dzenzvimbo ye euro. Chero zvazvingaitika, icho chikumbiro chinounganidza dzimwe njodzi nekuti pakupedzisira mabhanga ese achadzikira maererano nekuenderana kwemitengo yavo. Kunyangwe mafambiro aBankinter asiri iwo echisimba kupfuura ese. Asi, vanofamba zvine mwero mukuru.
Bankia: kushomeka kudhonzwa nezvidhina
Imwe yemabhenji muSpanish equities ndeye Bankia nekuda kwehunhu hwayo. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti bhanga rekare rekuchengetedza reMadrid rakawana purofiti yemari inosvika mamirioni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemasere mukota yekutanga yegore. Ndeapi masimba ako achienzaniswa nemakwikwi? Zvakanaka izvo zvinokoshesa izvozvi nehutsotsi hushoma uye kuratidzwa kwezvidhinha. Izvi zvinotamba mukufarira kutora zvine hungwaru nzvimbo muzvakakosha, nekuti hazvigone kukanganwika kuti yakanyudzwa mumatunhu akaipisisa muvhiki rapfuura.
Ehe, Bankia yakashuma mabhenefiti mazhinji kune vashoma uye vepakati varimari mumakore apfuura. Asi ndizvo chaizvo nekuda kwechikonzero ichi kuti uri panjodzi huru yeku kururamisa kune mhirizhonga pane kuchengetedzeka kwakasara kwebhangi chikamu. Chikonzero chakatokwana kuve kunze kwenzvimbo dzavo kwenguva yakanaka. Hazvishamise kuti vamwe vaongorori vezvemari vanofunga kuti mutengo wayo wakakosheswa panguva ino. Nekuti iri kutengesa pasi pekutengesa kumanikidza izvo zvishoma uye zvishoma zvakanyanya.
Santander yakadzikira hunyanzvi hwayo
Panyaya yesangano remari rinotungamirwa naAna Patricia Botín, tarisiro yacho haisi kuvimbisa zvachose. Izvi zvinovakirwa pachokwadi chekuti mazuva mashoma apfuura chakarasikirwa neiyo lateral renji iyo yavakaumba mukati memwedzi gumi nembiri yekupedzisira. Uye chii chaimiririrwa mumatanho e5,1 euros, uye izvo kubva zvino zvichienda kuve yakakosha yepakati-temu kuramba. Chimwe chinhu chinoshanda chinopesana nechinzvimbo muBanco Santander ndechekuti yakaonawo kusimuka kwakasimba mukusagadzikana. Nemisiyano yakakura pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi.
Pane kupokana, hatigone kukanganwa kuti iri boka rezvemari nderimwe remasimba pasirese uye iro rinofanira kubatsira kuwira kwaro kuve kwakanyanya kudzorwa kupfuura mamwe mapoka emabhangi. Ichi chinhu chinogona kubatsira vashoma nevepakati varimi kuti varambe vaine chivimbo munzvimbo idzi. Hazvishamisi kuti akapa iyo kudzikama kukuru mumwedzi ichangopfuura, kunyange hazvo iko zvino chiitiko chakasiyana zvakanyanya. Ndicho icho chikumbiro ichi chinopa varimi, chiri mumadziva evose vanoongorora zvemari.
BBVA ine yakakwira nhanho kusava nechokwadi
Kukosha kwakanyanya kusanzwisisika mubhizinesi reSpanish bhanga hapana mubvunzo kuti BBVA. Kune chikonzero chinopfuura chinogutsa uye ndizvozvo pagore pagore. Ichi ndicho chinhu chinogona kukurudzira kutengesa kuti kuenderere mberi munguva yepakati nekuda kwekushaya simba kunoratidzwa nemutengo wayo uye izvo zvinoratidza kuti zvese zvinogona kutonyanya kushata. Chimwe chinhu chisingatambe sekumanikidza kutenga kubva zvino zvichienda mberi, uye izvo zvichakosheswa pamwe nekukosha kuongorora nevevatengesi vevatengesi. Kunze kwekumwe kufunga kwakakosha kwaunofanira kuongorora mumavhiki ano.
Chimwe chezviitiko zvingangoitika ndezvekuti zviito zveBBVA ndizvo izvo mitengo yavo inonyudzwa mu bearishge chiteshi. Saka kuti kukosha kwezvikamu zvavo kuri kufamba pamatanho ari pakati pe5,60 na5,32. Chero bedzi maitiro emisika yemari iri bearish mukati memavhiki anotevera. Chero zvazvingaitika, chisarudzo chakaoma kuita mumamiriro azvino. Kunyangwe mumazuva apfuura, zvikamu zveBBVA zvakaratidzirwa nekuratidzira huwandu hwakawanda hwekutengesa.
Chii chingaitwe nevarimi?
Mune ino mamiriro anomuka kubva zvino zvichienda mberi, sarudzo yakanakisa ichave enda kune kumwe kuchengetedzwa pamusika weSpanish wemusika. Chero bedzi mamiriro ezvinhu emisika yemari akafanana neazvino. Uye izvi muhombodo hazvifi zvakamishuwarenzi, sezvaunozoziva iwe pachako. Chero zvazvingaitika, imwe yesarudzo dzauinadzo kutora mukana wekudzoka kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Muchikamu chepfupi-chenguva dzekushanda icho chichava chakafanana chaizvo neicho chakagadziridzwa muchikamu chimwe chete chekutengesa. Nekudaro, iwe unomhanyisa njodzi yekukochekerwa pane nzvimbo dzakashama.
Ehezve, imwe yeanoshanda uye akachengeteka masisitimu panguva imwechete inosimbiswa kuburikidza nekondirakiti yezvimwe zvigadzirwa zvemari. Semuenzaniso, mari yekudyara inoenderana nezvinhu zvemari zvinovimbika kupfuura masheya. Sezvo zvinogona kuve kesi yezvinhu zvakagadzirwa kana kunyangwe kubva pazvinzvimbo zvichienderana nekushomeka kwemisika yemari. Kwamunogona kuve nerwendo rukuru rwekukwira munguva yekusagadzikana kwehupfumi. Zvirinani iwe unogona kuzviedza kubva kune dzimwe nzvimbo dzekuchengetedza kana zvichipesana nemari yepasi pane zvawave uchifamba mazuva ano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mabhangi ndiwo akanyanya kurohwa chikamu mumusika wemasheya
Ezvikwereti zvikwereti: chii chiri hunhu hwavo?